WAH WAH: Akshey Kumar Oo Maanta Hoos U Dhigay Seddex Khan , Ilama Tartami Karaan | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
WAH WAH: Akshey Kumar Oo Maanta Hoos U Dhigay Seddex Khan , Ilama Tartami Karaan
Jul 17, 2016 - Comments off	Akshey Kumar ayaa waxaa uu ka hadlay awooda seddex khan isagoo sheegay in ay sameeynayaa filimaan badan , laakiin isaga aan ka liidan oo filimadiisa oo kale ay sameeynayaan.
Maalmahaan , Amir Khan oo soo wada filimka Dangal iyo Salman Khan oo sameeyey filimka Sultan iyo Shah Rukh Khan ayaa waxaa ay qabsadeen Box Office-ka.
Laakiin ogoow in Akshey uu kamid yahay Aktaradaha saameeynta ku leh Bollywood-ka aadna loo jecelyahay filimadooda , waxaana uu qabaa in 3 khan aan wax saameeyn ah isaga ku yeelankarin.
”Waan la dhacsanahay marka hore xidigaan Khan awoodooda iyo guulohooda, laakiin waxaa ay sameeyaan waxa aan sameeynayo oo kale,balse ma nihi dad tartamikara, marna ma dhicin midaas , mana dhicidoonto.
Akshey Kumar ayaa sanadkaan waxaa uu soo saaray filimaan badan oo saameeyn ku yeesheen Box Office-ka sida filimkii dhawaan ee Housefull3 iyo Airlift.